Flag of Zimbabwe - Flags of the world
This image of the Zimbabwe flag is in the Public Domain and can be used freely. If you use it on a webpage, a link to http://ourworldflags.com/Zimbabwe would be very much appreciated.
The flag of Zimbabwe was adopted on April 18, 1980. The soapstone bird featured on the flag represents a statuette of a bird found at the ruins of Great Zimbabwe.
Top Home > Library > Travel > Regional StatsClick to enlarge flag of ZimbabweIntroduction Background: The UK annexed Southern Rhodesia from the South Africa Company in 1923. A 1961 constitution was formulated that favored whites in power.
The Flag of Zimbabwe was adopted on April 18, 1980. The soapstone bird featured on the Flag of Zimbabwe represents a statuette of a bird found at the ruins of Great Zimbabwe.
National Flag of Zimbabwe: EPS vector format in both official proportions and a standard sized 3:5 ratio version. $4.95 - Zimbabwe - Macintosh - Download (.
Flag of Zimbabwe - Description of the Zimbabwe Flag * As the above picture of the Zimbabwe Flag indicates the flag has: *
The colours of the flag of Zimbabwe are based on those of the flag of the ruling party, the Zimbabwe African National Union (Patriotic Front ) (ZANU(PF). The party flag has a central panel of black.
The national flag of Zimbabwe consists of seven equal horizontal bands of green, yellow, red, black, red, yellow, and green with a white isosceles triangle edged in black with its base on the hoist side; a yellow Zimbabwe bird representing the long history of the country is
flag of Zimbabwe THE COUNTRY OF ZIMBABWE Official Name: Republic of Zimbabwe Continent: Africa Area: 150,817 Population: 19,010,000 (2005 estimate) Capital: Harare Language: English Embassy Website: http://harare.usembassy.gov/ OUTDOOR NYLON FLAGS.